Al-Shabaab oo 6 ku dishay weerar ay ku qaadday soohdinta Kenya - Sabahionline.com
Al-Shabaab oo 6 ku dishay weerar ay ku qaadday soohdinta Kenya
Rag hubeeysan oo al-Shabaab ah ayaa ugu yaraan lix qof, oo uu ku jiro wiil 15-jir ah, ku dilay weerar ay ku qaadeen soohdinta Kenya la wadaagto Soomaaliya Sabtidii (25-kii Maajo), sidaana waxa sheegay Capital FM-ta Kenya.
Kenyatta oo weerarrada Lamu ku eedeeyay kooxo siyaasadeed xilli la dilay 15 kale
"Koox yar oo Mujaahidiinta ah ayaa weerar ku qaaday saldhig Kenyanku leeyahay xalay, iyaga oo la wareegay saldhiggii, halkaasina ku dilay 8 kufaar ah in kabadan darsinna ku dhaawacay," ayay al-Shabab ku soo qortay barteeda Twitter-ka Axaddii. Al-Shabaab waxa kale oo ay sheegatay in ay afduubtay laba Kenyan ah isla markaana qabsatay qoryo.
Kormeeraha Guud ee Bilayska Kenya David Kimaiyo ayaa sheegay in al-Shabaab dishay lix qof. Waxa uu sheegay in rag hubeeysan ay soo weerareen laba xarumood oo uu leeyahay booliska birmadka qiyaasta 5:30-kii galalbnimo, halkaasna waxay ku dileen wiil yar, laba askari oo bilays ah, shaqaale ka tirsan Laan Qayrta Cas iyo laba rayid ah.
"Ammaanka ayaa kor loo qaaday labada xero iyo guud ahaan mandiqadda iyada oo halkaa la geeyay ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan Qaybta Adeegga Guud iyo Qaybta Gurmadka Deg degga ah," ayuu yiri.